Wararkii ugu dambeeyay Weerarka Kismaayo iyo Xildhibaan Caan ah oo Katirsan Dowlada Soomaliya oo lagu dilay - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
Wararkii ugu dambeeyay Weerarka Kismaayo iyo Xildhibaan Caan ah oo Katirsan Dowlada Soomaliya oo lagu dilay
Weerar ku bilowday Ismiidaamin ayaa lagu qaaday Hotelka Cas Caseey ee kuyaala magaalada Kismaayo, waxaana weerarkan ka dhashay khasaaro badan isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Dabley hubeesan ayaa lagu soo waramayaa in weli ka dhax degaalamayaan dhismaha Hotelka la weeraray, waxaana Hotelka gaaray ciidamada maamulka Jubbaland oo isku dayay in ay weerarka soo afjaraan.
Warar aan helnay ayaa sheegaya in dadka ku dhintay weerarka lagu qaaday Hotelka Cas Caseey ee magaalada Kismaayo uu ku jiro Senetar katirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo lagu magacaabayay Axmed Xaashi.
Hotelka weerarka lagu qaaday ayaa sidoo kale lasoo sheegayaa in ay ku dhinteen dad kale oo masuuliyiin ay ku jiraan , waxaana Hotelka la sheegay in ay degnaayeen Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya, Musaharaxiin, Masuuliyin iyo Qurbo joog ah.
Ciidamada amaanka ayaa isku dayaya in ay soo afjaraan weerarka lagu qaaday Hotelka Cas Caseey, waxaana mararka qaar la maqlayaa bambaanooyin iyo hub kale ay adeegsanayaan dableyda iyo ciidamada Jubbaland.